Akụkọ - CCTV akụkọ depụtara ihe eji akwụ ụgwọ dị ka otu n’ime ngalaba asaa kachasị ewu ihe owuwu.
Ihe ndi ozo: na February 28, 2020, ederede “oge eruola ịmalite oru ohuru nke akụrụngwa” ka emeputara, nke butere nlebara anya na mkparita uka banyere “ihe ohuru ohuru” n’ahia N'ikpeazụ, CCTV akụkọ depụtara ihe nkwụnye ụgwọ dịka otu n'ime isi ihe asaa kachasị ewu ihe owuwu.
1. Ugbu a ọnọdụ nke odori ikpo
Ngwongwo ohuru a na-elekwasị anya na sayensi na teknụzụ, tinyere ulo oru 5g, ulo oru UHV, okporo uzo di elu na uzo di iche iche di iche iche, ugbo ala ohuru na-ebu ahihia, nnukwu data data, ọgụgụ isi na ulo oru Intanet. Dika akụrụngwa nke ike eletriki nke ugbo eletrik, ekwesighi ileghara mkpa nke ikpo ahihia.
Mmepe nke ugbo ala ohuru bu uzo China nwere ike isi si na nnukwu ugbo ala kwaga mba ugbo ala di ike. Kwalite owuwu nke ịnweta akụrụngwa bụ nkwa dị ike maka mmejuputa usoro a. Site na 2015 ruo 2019, ọnụ ọgụgụ ndị na-akwụ ụgwọ na China rịrị elu site na 66000 ruo 1219000, ọnụọgụ nke ụgbọ ala ike ọhụrụ rịrị elu site na 420000 ruo nde 3.81 n'otu oge ahụ, nha ụgbọ ala kwekọrọ na-ebelata site na 6.4: 1 na 2015 ruo 3.1: 1 na 2019, ma kwalite ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ.
Dika akwukwo atumatu oru mmepe ohuru (2021-2035) nke ndi oru ulo oru na teknụzụ ihe omuma nyere, aguru na onu ogugu nke ugbo ala ohuru na China ga eru 64.2 nde site na 2030. Dika ihe eji ewu ulo. nke ngwongwo ugbo ala nke 1: 1, enwere uzo nke 63 nde na iwu nke ikpo oku na China n'ime afọ iri na-esote, a na-eme atụmatụ na a ga-etolite 1.02 trillion yuan nke na-akwụ ụgwọ ikpo ihe owuwu akụrụngwa.
Iji mezuo nke a, ọtụtụ ndị Refeyim abanyewo n'ọhịa nke ịkwụ ụgwọ, na "ịchụ nta" ihe ga-eme n'ọdịnihu amalitela n'ụzọ niile. N'agha a maka "echiche ego", ZLG na-agbasi mbọ ike inye ọrụ dị elu maka ụlọ ọrụ na-ebu ụgbọ ala.
2. Nhazi ọkwa nke isi ihe
1. AC ikpo
Mgbe odori ikike bụ ihe na-erughị 40kW, na AC mmepụta nke odori ikpo na-ghọrọ n'ime DC na-ana na-osisi batrị site na chaja ụgbọala. Ike dị obere ma ọsọ ọsọ adịghị ngwa. A na-etinyekarị ya na ebe a na-adọba ụgbọala nke obodo. Ka ọ dị ugbu a, imirikiti ikpe bụ ịzụta ụgbọ ala iji zipu ikpo, yana njikwa ọnụ ahịa nke mkpokọta niile siri ike. A na-akpọkarị ikpo AC ngwa ngwa ikpo ọkụ n'ihi ọnọdụ ọnọdụ ya na-adịghị ngwa ngwa.
2. DC ikpo:
Nchaji ike nke ikpokọta DC bụ 40 ~ 200kW, ma e mere atụmatụ na a ga-enyefe ọkọlọtọ na 2021, ike nwere ike iru 950kw. Ntughari ugbu a site na ikpo ihe na-ebu batrị ụgbọala ahụ, nke nwere ike dị elu na ọsọ ọsọ ọsọ. Ọ na-adịkarị arụnyere na centralized Nchaji saịtị dị ka awara awara na odori ụgbọ. Naturedị ọrụ dị ike, nke chọrọ uru dị ogologo oge. Ogidi DC nwere oke ike na ngwa ngwa ngwa ngwa, nke a na-akpọkwa ngwa ngwa ngwa ngwa.
3. ZLG-agba mbọ iji na-enye kwesịrị ekwesị Nchaji ebe ngwọta
Tọrọ ntọala na 1999, Guangzhou Ligong Technology Co., Ltd. na-enye mgbawa na ọgụgụ isi IOT maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị na-arụ ọrụ elektrọnik, na-enye ndị ahịa teknụzụ ọkachamara na ọrụ niile na ndụ ngwaahịa site na nyocha nhọrọ, mmepe na imewe, ule na asambodo na oke mmepụta mgbochi counterfeiting. Zhabeu ọhụrụ akụrụngwa, ZLG na-enye ihe kwesịrị ekwesị odori ikpo ngwọta.
1. Ikuku ikpo
AC ikpo nwere ala oru mgbagwoju anya na elu na-eri chọrọ, tumadi gụnyere odori akara unit, chaja na nkwurịta okwu unit. Ngwaahịa dị ugbu a na mmụba na-esote na-esite na ịzụta ụgbọ ala, ọkachasị site na ụlọ ọrụ ụgbọ ala na-akwado. The nnyocha na mmepe nke dum Nchaji ikpo na-agụnye onwe-amụ nke ụgbọala factory, na-akwado akụkụ ụlọ ọrụ nke ụgbọala factory na-akwado ụlọ ọrụ nke odori ikpo enterprise.
Ihe ikpo AC na-adabere na ARM architect MCU, nke nwere ike izute ihe ndị chọrọ ọrụ. ZLG nwere ike inye ike ọkọnọ, MCU, nkwukọrịta modul ngwaahịa.
Ihe ngosi ụdị nke atụmatụ izugbe gosipụtara n'okpuru.
2. Ikuku DC
DC ikpo (ngwa ngwa odori ikpo) usoro bụ dịtụ mgbagwoju, gụnyere ala nchọpụta, odori odori Nchaji, odori akara, nkwurịta okwu unit, wdg Ugbu a, ọtụtụ Refeyim nwere ijide ahịa na mpi maka ókèala, na ahịa òkè kwesịrị ịbụ agwakọtara.
ZLG nwere ike inye osisi, MCU, usoro nkwukọrịta, ngwaọrụ dị iche iche na ohere ndị ọzọ.
4. Ọdịnihu nke ịgba ụgwọ ikpo
N'okpuru ịchụ nta nke ndị Refeyim, ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ na-agbanye nnukwu mgbanwe. Site na nzụlite mmepe, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na ọnụọgụ nke ụgwọ a na-ebuwanye ibu, a ga-ekpuchizi ụdị azụmaahịa, a ga-ejikọkwa ihe ịntanetị.
Otú ọ dị, iji weghara ahịa ahụ ma weghara ókèala ahụ, ọtụtụ ndị dike na-alụ ọgụ n'ụzọ nke ha, na-enweghị echiche nke "ịkekọrịta" na "imeghe". O siri ike ịkọrọ ibe gị data. Ọbụna ọrụ njikọ nke ịkwụ ụgwọ na ịkwụ ụgwọ n'etiti ndị dike dị iche iche na ngwa dị iche iche ka enweghị ike ịmata. Ruo ugbu a, ọ nweghị ụlọ ọrụ enwela ike itinye data dị mkpa nke ikpo ọkụ niile. Nke a pụtara na ọ nweghị ụdị edo edo dị n’etiti ichikota ihe, nke siri ike igbo mkpa oriri. O siri ike ịmepụta ụkpụrụ dị n'otu, nke ọ bụghị nanị na-eme ka o siere ndị nwe ụgbọ ala ike ịnụ ụtọ ahụmịhe na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa, kamakwa ọ na-eme ka itinye ego isi obodo na oge na-efu ịgba ụgwọ ndị dike.
Ya mere, mmepe ọsọ na ọdịnihu ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda nke ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ na-ekpebi kpebisiri ike ikpebi ma a ga-enwe ike ịhazi ụkpụrụ dị n'otu.